Diiradda Amniga iyo Sagaashankii Maalmood ee la soo Dhaafay | KEYDMEDIA ONLINE
Diiradda Amniga iyo Sagaashankii Maalmood ee la soo Dhaafay
Dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada oo aan wali fara ka qodneyn. Waxaa muuqata in dowladda Federaalka aysan laheyn qorshe cad iyo istaraatiijiyad lagu wiiqi karo cududa argagixisada.
Tobankii sano ee ugu dambeeyey waxay kooxda Al-Shabaab weerarro kala duwan ku hayeen Soomaaliya, khaasatan Koofurta Soomaaliya iyagoo goobo badan gacanta ku dhigay kana samaystay xarumo muuqda iyo kuwo aan muuqan, ayna ka hawlgalaan taageerayaal iyo malleeshiyaad taabacsan qadiyadooda. Dowladda Soomaaliya iyo Maamul goboleedyaduba waxay la kulmayeen weerarro abaabulan oo isugu jira qaraxyo, shakhsiyaad la beegsanayo, afduub iyo hoobiyeyaal lagu weeraray xarumaha maamullada sida Xarunta Madaxtooyada, Garoommada diyaaradaha iyo xeryaha ciidammada.
Saddexdii bilood ee ugu dambeysay magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay weerarro dhaliyey khasaarooyin badan. Dowladda ayaa mar walba ku doodda inay hagaajisey amniga, khaasatan Xukuumadda hadda jirta ayaa qaaday tallaabooyin ay ku sheegeen inay amniga ku wanaajiyeen oo uu ka mid yahay inay xireen waddooyin badan oo caasimaddda u ah halbowle iyagoo aakhirkii xayndaab ka samaystay Madaxtooyo iyo goobaha u dhaw keliyana ay dowladdu mari karto Waddada Maka Al Mukarama iyo Waddada Dekadda.
Tallaabadaas ayaa dhalisay inuu ganacsigii ciriiri galo, sidoo kalena ay dhacday tacadi aan ku wanaagsanayn aadaminnimada oo aan xitaa isbitaalladii iyo iskuulladii sahal lagu tegi karin, lagana kala danaysan karin goobaha kala durugsan iyo degmooyinka caasimadda adigoo uusan kaa lumin wakhti badan, kharash badanna uusan kugu bixin. Arrimahaas ayaa horseeday inay dadweynuhu ka caroodaan kana rajo dhigaan inay Xukuumadani amniga wax ka qaban karto, waxayna inta badan dadku ku nuuxnuuxsadaan inay ku fashilantay amniga balse idaacadihii tebin lahaa qaarna lacag la siiyey qaarna la handadey, dowladduna dad ay lacag siisay ka hawlgelisey baraha bulshada si ceebahaas loogu beddelo faan iyo dicaayado been ah, oo dadka lagu marin habaabinayo, laguna faanayo in amnigii caasimaddu hagaagey.
Keydmedia ayaa isku dayda inay u kuurgasho amniga caasimadda iyadoo baaritaanka loo kala saaro xilli-xilli. Haddaba haddii aan tusaale u soo qaadanno bilihii u dambeeyey, baaritaanno iyo qiimayn ay Keydmedia diiradda saartay weerarradii ka dhacay caasimaddda iyo gobollada dalka lana kaashatay xeeldheerayaal amniga aqoon durugsan u leh ayay ku ogaatay in goobaha la weeraray iyo taariikhada hoos ku xusan ay ahaayeen weerarradii ugu cuslaa:
23/06/2020 ayuu ruux lugaynaya isku qarxiyey illinka laga galo xerada tababbarrada ee Dhegabadan (ku taal goob Xeebta Jaziira iyo Xalane u dhexaysa) taasoo ay dowladda Turki u dhistay Soomaaliya gacanna ay ka geysato maamulidda iyo tababbaridda ciidankaba. Ma ahayn markii ugu horreysey ee la beegsado xeradaas qofka isqarxiyeyna kuma guuleysan inuu sidii uu rabey uu u fuliyo oo gudaha ma uusan gelin waxuuna ku qarxay afaafka hore haddii kale khasaaruhu intaas wuu ka badnaan lahaa.
13/07/2020 ayay ahayd markii kolonyo gelbineysay taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka ee Soomaaliyeed Janaraal Odawaa uu jiiray baabuur laga soo buuxiyey walxaha qarxa oo uuna wadey naftiihallige. Taliyaha ayaa dirqi ku baxsaday waxaana qaraxaas ka dhashay khasaare nafeed iyo maalba. Qaar ka mid ah ciidankii taliyaha la socdey ayaa dhintay qaarna way dhaawacmeen. Taliyaha ayaa bilo ka hor ka badbaadey weerarro iyo qaraxyo isagoo hawl shaqo u joogey goobo ka mid ah Gobolka Shabeellaha Hoose.
04/07/2020 waxaa wee Xarunta Canshuuraha oo ku taal degmada Xamarjajab, meel u dhaw dekadda Muqdisho. Weerarka oo dhacay goor hore ayaa sababay inuu yaraado khasaaraha haddiise xilligaas ka dib uu dhici lahaa waxaa suurtogal noqon lahayd inuu khasaaruhu intaas ka badnaan lahaa.
08/07/2020 waxaa qarax loo isticmaalay miino waddada dhinaceeda la dhigay lagu weeraray baabuur uu lahaa ciidanka Booliska Soomaaliyeed. Qaraxa ayaa ka dhacay degmada Hodan goob u dhaw Dugsigii Sare ee Banaadir waxaana ka dhashay khasaare nafeed oo dadka dhintayna ay ku jireen gacanyareyaasha Taliyaha Ciidana Booliska Soomaaliyeed.
03/08/2020 waxaa uu ruux isku soo xiray qarax isagoo lugaynaya uu isku qarxiyey maqaayad lagu magacaabo Luul Yemen, taasoo ku taal goob aan ka fogeyn Dekadda Muqdisho. Maqaayadda ayaa ah goob ay ka cunteeyaan shaqaalaha & ciidanka ka shaqeeya dekadda, saldhigga Xamarjajab, ciidanka asluubta, shaqaalaha maxkamadda iyo shaqaalaha madaxtooyo. Weerarkaas ayay wax ku noqdeen ilaaladii maqaayadda iyo dad shacab ahaa oo ka agdhawaa.
08/08/2020 ayaay Al-Shabaab weerar loo adeegsaday baabuur uu wadey ruux isqarxiyey lagu weeraray Taliska Qaybta 27aad oo ku yaal meel ku dhaw Garoonka Ciyaaraha ee Muqdisho. Weerarka ayaa la fuliyey goor subax ah wuxuuna wadahii isqarxiyey ku guuleystey inuu gaarigu gudaha u galo xarunta oo ay ku sugnaayeen ciidan, qayba ay ka deggan yihiin qoysaskooda oo sidoo kale ay yaalleen gaadiidka dagaalka ee Ciidanka Xoogga Dalka & agab kale. Dhimashada ayaa gaartey 30 ruux dhaawacuna intaas wuu ka badnaa.
Todobaadka Keydmedia Online ay diyaarineysay Warbixintaan iyo Barnaamijka Maqal & Muqaalka ah waxaa Magaalada Muqdisho ka dhacay shan Weerar:
August 10, 2020: Inta la xaqiijiyay 19 qof, oo 15 maxaabiis ahaayeen ayaa lagu dilay dagaal ka dhacay gudaha Xabsiga oo u dhaxeeyay ilaalada iyo maxaabiis Al-Shabaab, waxaana kamid ah dhimashadda 4 Askari.
12 August 2020: Qof ayaa ku dhintay, mid kalena wuu ku dhaawacmay Qarax miino oo ka dhacay xili habeen ah inta u dhaxeyso waddada isku xirto Suuqa Beerta iyo iskuulka 21 October oo yaallo Degmada Waaberi ee gobolka Banaadir.
13 August 2020: Degmooyinka Waaberi, Boondheeri, Xamar-Jajab iyo Yaaqshiid ayaa xili fiidkii ah waxaa ka dhacay qaraxyo loo adeegsaday bambooyinka gacanta, oo lagu weeraray saldhiyo Booliska iyo fariisimo Ciidan. Wax Khasaaro ah kama dhalan.
16 August 2020: Waxaa weerar culus lagu qaadey Elite hotel oo ku yaalla xeebta Liido ee magaaladda Muqdisho. Ugu yaraan 16 qof, oo 4 kamid ah ay ahaayeen dabley hubeysan oo gudaha hotel-ka ka dagaalamay ayaa lagu dilay weerar oo qarax gaari ku billowday, kadibna xigay dagaal toos ah.
16 August 2020: Wasiirka Waxbarashadda C/llaahi Goodax Barre ayaa ka badbaaday qarax miino oo kolonyo uu la socday lagula eegtay inta u dhaxaysa Doolow iyo Beled-Xaawo, oo kawada tirsan gobolka Gedo. Labo Xildhibaan oo wasiirka la socday ayaa ku dhaawacmay, waxaana loo soo qaadey Muqdisho.
Sidoo kale isla xilligaas waxaa magaalada Muqdisho dilal qorshaysan loogu geystay ciidan ka tirsan booliska oo shaqo ka hayey goobo kala duwan oo caasimadda ka mid ah iyadoo mararka qaarna hore loo sii qaatay qoryihii ay shaqada ku hayeen.
Markii si dhaw loo jalleeco weerarradii sannadihii tegey waxaa laga fahmi karaa Al-Shabaab inaysan weerarro teel-teel ah iska qaadin balse ay beegsadeen goobo iyo dad cayiman kuwaasoo inta badan leh xiriir dhaw, sida xilligii ay hoteellada weerari jireen, xilligii ay xarumaha degmooyinka weerari jireen, xilligii ay xarumaha wasaaradaha weerari jireen.
Welwelka ugu weyn ee masuuliyiinta qaar laga qabi karo ayaa ah inayba yihiin kuwo u adeega wadammo shisheeye oo aan rebin inay Soomaaliya nabadi ka dhalato. Weerarada Al-Shabaab ma ahan kuwo ay iska qaadaan xilli walba; waxay si gaar ah u beegsadaan hay’ado dowladeed, shaqaalaha goobo gaar ah iyo xarumo gaar ah. Haddaba markii aad jalleecdid goobaha iyo shakhsiyaadka qaraxyada iyo dilalka lala beegsaday 2-dii bilood ee uu dambeysey, waxaa ku cad in bartilmaameedku hadda uu yahay ciidanka Booliska iyo ciidanka Xoogga Dalka ee Soomaaliyeed iyo dabcan xarumaha muhiimka ah ee caasimadda iyo gobollada ku yaal ee ay ka hawlgalaan.
Xeeldheereyaasha oo aan weydiinney bal inay noo iftiimiyaan qaababka looga hortegi karo weerarrada isugu jira qaraxyada naftood-halligeyaasha, miinooyinka waddada dhinaceeda lagu aaso amase la dhigo iyo dilalka qorshaysan ee lagu bartilmaameedsado shakhsiyaad ka mid ah shaqaalaha dowladda ee ciidan iyo rayidba leh.
Waxay inoo sheegeen inay muhiim tahay in la qaado tallaabooyin dhawr ah oo lafdhabar u noqon kara istaraatiijiyadda la-dagaalanka argagixisada sida: xuuraan iyo wardoon sugan. Sidoo kale waxay sheegeen inay muhiim tahay in fahan buuxa laga haysto lana qiimayn karo weerarradii aan soo dhaafnay taaso suurtogelin karta in la ogaado goobaha iyo hay’adaha sida gaarka ah ay diiradda weerarradu u saaran tahay ee la bartilmaameedsanayo iyo xiriirrada ay weerarradaas qorshaysani yeelan karaan.
Falanqeyn Mohamud M Uluso | 17 September 2021 12:52
Falanqeyn 17 September 2021 12:52